Ahoana ny fomba hisafidianana tranokala mampiaraka tsara? | Bezzia
Ahoana ny fomba hisafidianana tranokala mampiaraka tsara?
Bezzia | | fifandraisana
Amin'ity fiainana ity dia mora miova ny zava-drehetra, mivoatra. Ny hafainganam-pandeha mampihetsi-po ankehitriny sy ireo fandrosoana sy zavatra hita marobe, indrindra eo amin'ny sehatry ny haitao, dia sasany amin'ireo antony manazava ity fiovan'ny toetrantsika tsy miovaova ity amin'ny fomba fiasa, fitondran-tena ary mifanena amin'ny olon-kafa, ary tsy toy ny namana, fa mba hametrahana fifandraisana feno fitiavana. Miova ny fomba filalaovana fitia.
Tambajotra sosialy na pejy noforonina ho an'ity tanjona ity no ampiasaina, toy ny pejy fifandraisana, Tsy fotoana intsony hihaonana amin'ny fitiavanao ao anaty bara, ao amin'ny trano fandihizana na toerana malalaka ho an'ny daholobe hafa, toy ny nitranga taona vitsy lasa izay.
Nandritra ny fotoana kelikely, ny Ny fampiharana sy tranonkala mampiaraka dia nitombo tao amin'ny tontolon'ny nomerika, ary tsy vitan'ny nahazo toerana malalaka amin'ny Internet fotsiny izy ireo, fa nanjary nalaza ihany koa ary nahita fahombiazana teo amin'ireo tanora fa tsy dia tanora loatra. Inona koa, noho ny fisehoan'izy ireo, ny tantaram-pitiavana mahafinaritra na ny finamanana hafa dia nipoitra izay notazomina nandritra ny fotoana, na dia tsy mpivady aza. Raha iray amin'ireo olona te-hahita ny antsasaky ny tsara indrindra eto amin'ity tontolon'ny dizitaly ity ianao dia hanome anao torohevitra vitsivitsy momba ny toerana hanombohana.
Saingy alohan'ny hanomezana tadidy boribory ho an'ireo izay misitrika ireo fampiharana ireo voalohany, dia hasehontsika fa, amin'ity vanim-potoana teknolojia ity, ity endrika mampiaraka ity dia mandresy satria angamba mora kokoa ny maneho fihetseham-po amin'ny alàlan'ny efijery, fandroahana an'io singa mahamenatra io; satria very izany fahazarana mahalala ny filalaovana fitia izany; na satria zava-baovao izany amin'izao fotoana izao izay ahafahana manao ny zava-drehetra amin'ny efijery solosaina tsotra.
Tonga tany amin'ireto andalana ireto, mipetraka ny fanontaniana, ny fomba hisafidianana tranonkala mampiaraka ary hahatonga azy io ho matotra? Ny safidy marina amin'ny tranonkala mampiaraka dia zava-dehibe hahazoana ny valiny tadiavina, na dia tsy azo antoka aza ity farany. Misy antony isan-karazany, ary koa zavatra niainan'ny mpampiasa maro, momba ny fisafidianana na fitadiavana vady amin'ny Internet. Ny zavatra voalohany dia ny mifidy tranonkala mampiaraka izay mifanaraka amin'ny zavatra tadiavinao. Izany hoe raha misy maniry fihaonana mahazatra na, ny mifanohitra amin'izay no tadiavinao hihaona amin'ny antsasaky ny tsara kokoao.
Raha tsy mampihatra an'io fifantenana io isika dia azo antoka fa tsy hahita ny valiny andrasana. Faharoa, alohan'ny hitadiavantsika ny hoavintsika ho avy dia tsy maintsy mijery ny lazan'ilay tranonkala mampiaraka isika.
Tena ilaina izany ankehitriny, satria maro ny fisolokiana amin'ny harato vokatry ny fanaovana nomerika. Tsy maintsy miditra amin'ny pejy ofisialy isika, ary ny tanjony dia natao ho an'io tanjona io, ary ekena amin'ny sehatra io. Ho fanampin'izany, amin'ity tranokala ity dia ho hitanao ihany koa ny hevitry ny maro amin'ireo tranonkala mampiaraka tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Avy eo, ho hitantsika fa misy pejy misy karama na olon-kafa afaka. Eto dia efa miankina amin'ny faniriana sy ny safidin'ny tsirairay hampiasa vola. Ary mahafantatra ny fomba hifaneraserana amin'olon-kafa, amin'ny fahafantarana fa tsy misy endrika miafina handresena olona iray hafa.
Meetic, safidy indostrialy
Ary pejy inona no azontsika atolotra ato amin'ity lahatsoratra ity? Araka ny efa nolazainay, manolotra karazany maro ny sehatra, ary tsy maintsy hanao fandinihana izay atolotry ny tsirairay ianao na mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana anao na tsia. Azonay atao ny manonona anao amin'ny iray amin'ireo tranonkala mampiaraka fanta-daza miaraka amin'ny rakitsoratra marobe ao amin'ity sehatra ity como el Meetic.
Azo antoka fa efa naheno momba azy ireo ianao, satria misy any amin'ny firenena maro izy io ary a ny tranonkala ny teny nalaza indrindra. Ity tranonkala mampiaraka ity dia mifantoka indrindra amin'ny mitady mpiara-miasa marin-toerana fa mamela ny varavarana misokatra hihaona amin'ny mpitovo hafa koa nefa tsy misy fanoloran-tena, na dia tsy, ahoana hoy isika no tena ifantohana. Lafiny iray tokony homena lanja.
Ilay mpampiasa izay mitady vady dia manoratra ny tantarany ary manome vaovao momba azy, nefa koa momba izay tadiavinao Araka ny andiana masontsivana izay tsy maintsy fenoina: fomba fiaina, tsiro, data manokana, sary, asa, ankoatry ny maro hafa, na dia tsy voatery hamita ny sehatra rehetra aza izany. Tsotra, arakaraka ny fampahalalana bebe kokoa omena, ny safidy bebe kokoa hisy hahazoana valiny tsara, na dia hiankina amin'ny zava-drehetra aza ahoana ny fandehan'ny tantara raha vao mihaona ny roa tonta.
Alohan'izay ary rehefa vita ny tantara dia homena anao ity tranonkala mampiaraka ity manolotra sosokevitra maromaro Na azonao atao tsotra izao ny mampiasa ny safidy fikarohana mba hahitana olona mitovy aminao araka ny mombamomba azy sy ny mifanentana aminy. Satria tahaka ny ahitanao ny piraofilina sy ny tian'ny olon-kafa, dia afaka mahita sy mahafantatra azy koa izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ahoana ny fomba hisafidianana tranokala mampiaraka tsara?
Tombontsoa Granola: Ataovy an-trano ilay trano!
Inona ny dian-tongotra ekolojika ary ahoana ny fampihenana azy